Ra’isul Wasaaraha oo shir gudoomiyay kulan looga hadlay dar-dargelinta qorshaha deyn cafinta dalka – Bandhiga
Ra’isul Wasaaraha oo shir gudoomiyay kulan looga hadlay dar-dargelinta qorshaha deyn cafinta dalka
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta guddoomiyay shirka todobaadlaha ah ee looga hadlo dar-dargelinta qorshaha barnaamijka deyn cafinta dalka.
Shirka oo lagu qabtay xarunta wasaaradda maaliyadda ayaa waxaa ka qayb galay wasiiru-dowladaha wasaaradda maaliyada, agaasimaha guud iyo agaasime waaxeedyada wasaaradda iyo guddoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamaanka, xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi Siraaji.
Kulanka intii uu socday ayaa Ra’iisul Wasaaraha xog laga siiyay heerarka kala duwan ee la soo maray, meesha hadda uu marayo qorsha cafinta deymaha, waxaana aad loo falanqeeyay guulaha la gaaray, sida ugu habboon ee dowladda federaalku uga soo bixi karto shuruuda ku xiran wareega afaraad ee qorshaha daynta dalka looga cafinayo (SPM4), heshiiyada ay wada galeen dowladda iyo hey’adaha maaliyadda adduunka iyo shuruucda lagama maarmaanka u ah deynta cafinta ee baarlamaanka laga doonayo in ay meel mariyaan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa faray wasaaradda maaliyadda, hey’adaha qaybta ka ah ka shaqeynta qorshaha deyn cafinta iyo guddigii loo xil saaray dhammeynta qorshaha dalka daynta looga cafinayo in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan buuxinta shuruudaha, si guul looga gaaro himilooyinka ummadda Soomaaliyeed.
Dowladda Soomaaliya ayaa buuxisay dhammaan shurudihihii ku xirnaa SMP1, SM2 iyo SMP3, waxaana dhammaan hey’adaha maaliyadda dunida iyo wadamada deymaha ku leh Soomaaliya ay ammaaneen sida dowladda ay uga go’antahay ka mira dhalinta qorshaha deyn cafinta dalka oo heer aad u wanaagsan soo gaaray.
Dowladda France oo heegan galisay ciidamada amniga kadib cabsi xoog leh oo soo wajahday
Akhriso: Qabiilada iyo Magacyada Xildhibaanada cusub ee Hirshabelle